Welcome to Aayaha Nolosha » MICNAHA IYO QIIMAHA BISHA RAMADAAN (QEYBTA 9:AAD).
May 15, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
5. Daawada lacuno (kiniinka ama sharoobada iwm) Soonka way jabinaysaa, balse hadii qofka lagu duro Irbad daawa ah, Soonkii kama jabayo, hadyna ahayn Daawo lagu lifaaqay cunto ama nafaqo Jirku ku kobcayo. Ø Mantaga layska keenaa Soonka waa jabinayaa, lakiin haduu ku soo dhaafo waa uun layska dhaqi Soonkiina majabayo. Ø Galmada maalinta Soonku waa Danbi weyn, waxaana ka dhalanaysa Ciqaab adag, balse haday lamaanihii isqabay habeenkii isu tagaan, waagiina u baryo iyagoon qabaysanin, wax dhibaato ah maleh, subaxdii unbay qabaysanayaan soonkoodiina waxba kama hallaabayo.
Waxaa kalo Soonka jabiya inuu qofkii soomanaa shahwo ama biyo iska keeno, isagoo Xaaskii lays taataabtay, amaba uu gacantiisa isticmaalay. Ø Qabaysku Soonka majabiyaa? Maya majabiyo, balse qofku haduu rabo inuu is qaboojiyo, Oonkana iska yareeyo Ajarkiisuu hoos u dhigayaa, haduuse qofku soo shaqeeyay soo dhididay waxaa larabaa inuu qabaysto, maadaama uu Islaamku nadaafada aad ujecelyahay una uqadariyo. Ø Qofka soomani macadaysan karaa? Haa wuu cadaysan karaa, waqti kasta maxaayeelay Cadaygu waa Sunna aad u qiima badan, qofka Muslimka ahna laga rabo inuu badsado.
Soonkuna madaama uu yahay Cibaado aad u qiima saraysa, wuxuu Islaamku nabaray in lagu dhamaystiro 2shay oo qurux iyo wanaag ku dhamaystira: 1. Ictikaaf oo macnaheedu yahay inuu qofka sooman ee kari karaa 10ka habeen ee bisha ugu danbaysa ku xaroodo Masaajidka, oo uusan kasoo bixin illaa wax lamahuraan ah ma ehee, sida inuu jirado oo dhakhtar aadayo oo kale.
La soco qeybo kale oo muhiim ah, faa’iido badana xambaarsan “Insha allaah”.